21 Job wee zaa, sị: 2 “Geenụ ntị nke ọma n’ihe m na-ekwu,Ka ọ bụụrụ unu ihe ngụgụ obi. 3 Nweerenụ m ndidi, mụ onwe m ga-ekwukwa okwu;M kwuchaa, onye ọ bụla n’ime unu nwere ike ịkwa m emo.+ 4 Ọ̀ bụ mmadụ ka m na-ekwupụtara nchegbu m?Ka ọ̀ bụ gịnị mere mmụọ m ji nwee ndidi? 5 Leenụ m anya, ka o jukwa unu anya,Kpuchienụ aka n’ọnụ.+ 6 Ọ bụrụ na mụ echeta ya, obi adịghịkwa ezu m ike,Anụ ahụ́ m na-ama jijiji. 7 Gịnị mere ndị ajọ omume ji adị ndụ,+Kaa nká, nweekwa akụ̀ dị ukwuu?+ 8 Ha na-ahụ ka ụmụ ha ghọrọ mmadụ,Hụkwa ka ụmụ ụmụ ha ghọrọ mmadụ. 9 Ụlọ ha bụ udo, bụrụkwa ebe ụjọ na-adịghị,+Ụtarị Chineke adịghịkwa edesa ha n’ahụ́. 10 Oké ehi ya na-agba nne ehi, o wee dịrị ime, ọbara ọcha ya adịghịkwa ala n’iyi;Nne ehi ya na-amụ nwa,+ ime adịghịkwa apụ ya. 11 Ha na-ezipụ ụmụ okoro ha dị nnọọ ka ìgwè ewu na atụrụ,Ụmụ ha ndị ikom na-awụgharịkwa. 12 Ha na-eji obere ịgbà na ụbọ akwara na-agụ egwú,+Ha na-aṅụrịkwa ọṅụ mgbe ha na-anụ ụda ọjà. 13 Ha na-ekpori ndụ ụbọchị ha niile,+Ma n’otu ntabi anya, ha na-agbada na Shiol. 14 Ha na-asịkwa ezi Chineke, ‘Hapụ anyị!+Anyị enweghịkwa mmasị n’ịmata ụzọ gị.+ 15 Gịnị ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile bụ, nke mere anyị ga-eji jeere ya ozi,+Oleekwa uru anyị na-erite na anyị arịọwo ya arịrịọ?’+ 16 Lee! Ihe ịga nke ọma ha adịghị n’aka ha.+Atụmatụ ndị ajọ omume dị anya n’ebe m nọ.+ 17 Ugboro ole ka e menyụtụworo oriọna ndị ajọ omume,+Ọ̀ bụkwa ugboro ole ka ọdachi ha na-adakwasị ha?Ugboro ole ka o jitụworo iwe ya mee ka mbibi bịakwasị ha?+ 18 Hà na-adị ka ahịhịa ọka ifufe na-ebugharị,+Dịkwa ka igbogbo ọka nke oké ifufe bupụrụ? 19 Chineke ga-ewere ihe ọjọọ mmadụ mere debere ụmụ ya;+Ọ ga-akwụ ya ụgwọ ka o wee mara.+ 20 Anya ya ga-ahụ ọdịda ya,Ọ bụkwa ọnụma Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ka ọ ga-aṅụ.+ 21 N’ihi na, gịnị ga na-enye ya obi ụtọ n’ụlọ ya mgbe ọ na-anọkwaghị,Mgbe a ga-egbubi ọnwa ole o nwere ọkara?+ 22 Ọ̀ ga-akụziri Chineke ihe,+Mgbe Chineke na-ekpe ndị dị elu ikpe?+ 23 Onye dị otú a ga-anwụ mgbe ihe niile zuuru ya,+Mgbe ọ na-enweghị nchegbu na mgbe obi ruru ya ala; 24 Mgbe apata ụkwụ ya bụ abụba abụba,Mgbe ụmị ọkpụkpụ ya nwekwara mmiri. 25 Onye nke ọzọ ga-anwụ n’obi ilu,Mgbe ọ na-adịbeghị ihe dị mma o riri.+ 26 Ha niile ga-edina n’ájá,+Ikpuru ga-ekpuchikwa ha.+ 27 Lee! Amaara m ihe unu na-eche,Marakwa atụmatụ unu ga-eji meso m mmeso ọjọọ.+ 28 N’ihi na unu na-asị, ‘Olee ụlọ onye ahụ a ma ama,Oleekwa ụlọikwuu ndị ajọ omume, bụ́ ebe obibi ha?’+ 29 Ọ̀ bụ na unu ajụbeghị ndị na-eme njem n’okporo ụzọ ase?Ọ̀ bụ na unu adịghịkwa enyocha ihe akaebe ha nke ọma, 30 Na a na-ahapụ onye ọjọọ ndụ n’ụbọchị ọdachi,+A na-anapụtakwa ya n’ụbọchị oké iwe? 31 Ònye ga-anọ n’ihu ya gwa ya ihe ọ na-eme?+Ònyekwa ga-akwụ ya ụgwọ ihe o mere?+ 32 Ọ bụ n’ili ka a ga-ebuba ya,+A ga-echekwa ili nche. 33 Ọkpụrụkpụ ájá nke ndagwurugwu iyi ga-atọ ya ụtọ,+Ọ ga-adọkpụrụkwa ihe niile a kpọrọ mmadụ ka ha so ya n’azụ,+A pụghịkwa ịgụta ndị bu ya ụzọ ọnụ. 34 Leenụ nkasi obi na-enweghị isi unu na-enye m,+Ihe niile unu na-aza m ka bụkwa ihe na-ezighị ezi!”